Tia Hampiheritreritra Anao ny ‘Anonymous International’ Hoe Tsy Afaka Manafina Na Inona Na Inona Kremlin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2015 17:18 GMT
Nifantoka tamin'ny fandaharana fanontaniana-valiny, alefa an-televiziôna isan-taona amin'i Vladimir Poutine, tamin'ny vahoaka ny herinandro lasa teo ny fijerin'ny media maneran-tany. Tamin'io andro io, anefa, nahatafavoaka moramora harena be hafa an'ny fifaneraseràna manokana an'ny governemanta indray ilay vondrona aloka “Anonymous International” (Maneran-tany tsy mitonona anarana).
Anonymous International, fantatra amin'ny anarany amin'ny fanaovan-gazety azy ihany koa hoe, Shaltai Boltai, nanao matoam-baovao tamin'ny voalohan'ity volana ity, tamin'ny famoahany ireo hafatra an-tsoratra miisa an-tapitrisany lazaina ho avy tamin'ny findain'i Timur Prokopenko, mpiasam-panjakana ambony iray ao amin'ny Rafim-pitantanan'i Poutine.
Misy ireo dikasarinà emailaka an'arivony maro lazainy ho avy tamin'ny kaonty emailaka manokan'i Alexander Zharov, ny lohan'ny media mpanaramason'i Kremlin, Roskomnadzor, ilay loharanom-baovao niporitsaka vaovao. Na dia ny mpiasam-panjakana ambony sahala amin'i Zharov aza dia mampiasa kaonty emailaka manokana mba hiresahana “resaka ofisialy sy ampahany ofisialy izay mikasika ny raharaham-bahoaka,” hoy i Shaltai Boltai nanoratra ao amin'ny lahatsoratra anaty blaogy, nilaza ilay famoahana, milaza izy fa nanapaka hevitra ny tsy hamoaka ireo hafatra sasany izay misy loharanom-baovao manokana ny vondrona.
Роскомнадзор читает вас, а мы читаем Роскомнадзор 🙂 http://t.co/6KIVJMJ5c7
— Shaltay Boltay (@b0ltai2) April 16, 2015
Mamaky [ireo emailakao] Roskomnadzor, fa mamaky ireo [emailakan’] i Roskomnadzor koa isika 🙂
Tamin'ny fanadihadiana ireo emailaka niporitsaka, nanipika ireo fifanankalozana enina tena tokony ho jerena sy manan-danja indrindra ny vohikala The Insider. Ny loharanom-baovao tena manala-baraka indrindra naborak'ilay fanaporitsahana loharanom-baovao angamba dia hoe i Mikhail Demin, izay lasa tale jeneralin'ilay onjam-peo malaza Ekho Moskvy ny volana Desambra 2014, dia lazaina fa nifanaraka tamin'i Zharov momba ireo fanapaham-baovao.
Misy emailaka iray lazaina ho nampiseho an'i Demin mangataka mazava ny fanomezan-dalan'i Zharov ho an'ny Ekho Moskvy mba handefa fitaovana fampielezan-kevitra ho an'ny diaben'ny mpanohitra hatao ny 1 Martsa. Ho valin'io fampahafantarana mibaribary io, nibitsika izao i Leonid Volkov, mpanoratra efa ela tao amin'ny Ekho Moskvy, i Alexey Venediktov lehiben'ny mpanoratra vaovao, ary i Alexey Navalny mpiara-miasa akaiky izay avy amin'ny mpanohitra, izay tafiditra tamin'ny fanomanana ilay diabe an'ny mpanohitra:
Размещением проморолика марша “Весна” занимался Немцов, он говорил, что “Эхо” тянет время – а то было “согласование” https://t.co/nURliEXWJ6
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 16, 2015
Nemtsov, izay misahana ny fizaràna ilay horonantsary fampielezan-kevitra an'ilay diabe “Lohataona”, dia nilaza fa naka fotoana maharitra ny “Ekho”, fa hita fa nisy ny “fifandaminana”
Raha mbola manohy mamoaka fifandraisana manokana an'ny governemanta ny Anonymous International, mbola mitohy miodikodina ihany ny adihevitra manodidina ny fomba nahazoan'ilay vondrona mahazo loharanom-baovao maro be toy izao, ary hoe nahoana ilay vondrona no mandefa ny zavatra ataony, amin'ny fotoana anaovany azy.
Tamin'ny fanadihadiana ny mety ho vokatra araka ny lalàna ny amin'ny zavatra ataon'ny Anonymous International, nilaza i Pavel Chikov mpahay lalànan'ny zon'olombelona, fa ireo hafatra an-tsoratra navoaka vao haingana “dia mamboraka ireo fomba fiasa ratsy indrindra an'ny Fitantanan-draharahan'ny Fitondràna, anefa tena nosivanina tsara tokoa ilay fifandraisana navoaka, ka na dia tena tia mafy aza ianao, ho sahirana ianao hitady fanitsakitsahan-dalàna aharesy lahatra.” Milaza ilay fanehoan-kevitr'i Chikov hoe somary mitàna tena ihany ny Anonymous International amin'ny lafiny sasany, mikendry kokoa ny fnalam-baraka noho ny fikorontanana be.
Mijery ny “ahoana sy nahoana” aorian'ireo fiporitsaham-baovao an'ny Anonymous International ireo ihany koa ny fanadihadiana ataon'ny Gazeta.ru.
Nanamarina ny manam-pahaizana iray tsy fantatra anarana nokaramain'ny Gazeta.ru, fa avy tamin'ny iCloud ny ankamaroan'ireo hafatra navoaka tamin'ilay fiporitsaham-baovao vao haingana. Nanazava ilay manam-pahaizana, fa mety afaka natao tamin'ny fomba maro io, sahala ny amin'ny alalan'ny “phishing” na ny fampiasàna “sniffer,” teknolojia natao afaka mahita sy maka ireo serasera mandalo amin'ny tambajotra nomerika iray, toy ny tambajotra Wi-Fi ho an'ny daholobe. Ho famintinana azy, nanatsoaka ilay olon'ny Gazeta.ru fa tsy voatery ho sokajiana sahala amin'ireo asan'ny mpitsikilo matihanina ireo asan'ny Anonymous International, ary misalasala ny fisian'izany aza izy. Tsy fantatr'ireo orinasa mpitsikilo matotra mikatona Rosiana ihany koa hoe iza no ao ambadik'i Boltai, hoy ilay olona.
Raha ny amin'ny tanjon'ny Anonymous International indray, ilay tatitry ny Gazeta.ru aloha dia mieritreritra ilay hevitra mipoitra hoe ireo ao anatin'i Kremlin ihany no mampiasa ireo loharanombaovao miporitsaka ireo mba hanamafisana ireo toerany ary hanapotehina ireo mpifaninana aminy. Maro ireo mino fa ny filoha mpanampy voalohan'ny ekipan'i Poutine no kendrena voalohany amin'ireo loharanom-baovao miporitsaka ireo, i Vyacheslav Volodin izany, ary ny manodidiana azy. Araka ny loharano hafa iray, tsy fantatra anarana, miara-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny sehatry ny fiambenana ireo fahavalon'i Volodin, izay lazain'ny Gazeta.ru fa mety hanazava ilay lazaina fa fidirana tsy ara-dalàna tao amin'ny sehatra mikaton'ny Gov.ru, tamin'ny fisandohana vao haingana ny mpamatsy vaovaon'i Medvedev.
Nisy loharano hafa tsy fantatra anarana indray koa nilaza an'ny Gazeta.ru hoe mety mamatsy loharanom-baovao an'ny Anonymous International, ireo mpiandraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana izay very tombotsoa. Nilaza ireo loharano tsy mitonona anarana maro samihafa fa ny tanjona voalohan'ilay vondrona dia ny haka vola iray alina dolara any amin'ireo tomponandraikitra, ary haborany ireo loharanom-baovao rehefa tsy mandoa ireo kendreny. Loharano farany, izay “mifanakaiky an'ny Kremlin,” aza nilaza fa ao ambadik'ireo fivoahana loharanom-baovao ireo i Medvedev, mampiasa azy ireo hanaovana valifaty kely, raha sady mody nisandoka ny kaonty Twitter-any izy mba hanalàna ny fiahiahiana.
Toa tsy hita ho talanjona loatra tamin'ny fanadihadian'ny Gazeta.ru ny Anonymous International, anefa, na dia naka tao amin'ny Twitter aza mba hanadrohadroana ilay fanadihadiana, izay nahazo fanazavana maro sy loharano:
http://t.co/PqtzUnlcGb Еще несколько версий на наш счет
— Shaltay Boltay (@b0ltai2) April 17, 2015
[rohy makany amin'ny lahatsoratry ny Gazeta.ru] Mahita izahay fa misy ireo fomba filaza maro hafa